Starta စျေး - အွန်လိုင်း STA ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Starta (STA)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Starta (STA) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Starta ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 080 766.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Starta တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Starta များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
StartaSTA သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.63StartaSTA သို့ ယူရိုEUR€1.38StartaSTA သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.25StartaSTA သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.49StartaSTA သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr14.73StartaSTA သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.10.3StartaSTA သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč36.37StartaSTA သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł6.1StartaSTA သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2.18StartaSTA သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2.28StartaSTA သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$36.47StartaSTA သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$12.63StartaSTA သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$8.86StartaSTA သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹122.23StartaSTA သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.275.15StartaSTA သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2.24StartaSTA သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.47StartaSTA သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿50.87StartaSTA သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥11.35StartaSTA သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥172.6StartaSTA သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1937.41StartaSTA သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦630.27StartaSTA သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽120.09StartaSTA သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴45.17
StartaSTA သို့ BitcoinBTC0.000139 StartaSTA သို့ EthereumETH0.00418 StartaSTA သို့ LitecoinLTC0.0282 StartaSTA သို့ DigitalCashDASH0.0166 StartaSTA သို့ MoneroXMR0.0172 StartaSTA သို့ NxtNXT116.78 StartaSTA သို့ Ethereum ClassicETC0.234 StartaSTA သို့ DogecoinDOGE478.71 StartaSTA သို့ ZCashZEC0.0169 StartaSTA သို့ BitsharesBTS62.25 StartaSTA သို့ DigiByteDGB56.44 StartaSTA သို့ RippleXRP5.54 StartaSTA သို့ BitcoinDarkBTCD0.0553 StartaSTA သို့ PeerCoinPPC5.35 StartaSTA သို့ CraigsCoinCRAIG730.66 StartaSTA သို့ BitstakeXBS68.38 StartaSTA သို့ PayCoinXPY27.99 StartaSTA သို့ ProsperCoinPRC201.19 StartaSTA သို့ YbCoinYBC0.000862 StartaSTA သို့ DarkKushDANK514.19 StartaSTA သို့ GiveCoinGIVE3471.36 StartaSTA သို့ KoboCoinKOBO364.63 StartaSTA သို့ DarkTokenDT1.5 StartaSTA သို့ CETUS CoinCETI4628.48
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 08 Aug 2020 22:50:02 +0000.